AMMAAN BOODA JIRAA OROMOO DHIISITII DU’AAN OROMOOLLEE HARQOOTA GABRUMMAA HIN BAATU -
Kunoo, amma bara moofaa keessaa gara bara haaraatti dabarree jirra. Barri dabre kun, barri 2015 bara Oromooti jechuu dandeenya. Kan bara san bara Oromoo taasese immoo Qabsoo Oromoo isa Dhaloota Qubeetiin dachee Oromiyaa sochoosee, diina Oromoo ollachiise sani. Jarri qawwee baaddhatee, harree ooffatee, barabaasoon Oromiyaa seenee qabeenya uummata Oromoo saammatee, abbootii kitilaa (abbootii miliyoonaa) tahe kun, kunoo waggaalee 24 guutuu qawween gateettii isaa irraa hin bune. Takkaa qawwee boraafatee rafuu hin dhiifne. Amma qawween lafee fi dhiiga isaa keessa tuulamuun sammuu isaayyuu weerare jira. Eeyyee, jarri qawwee bakka amantii ofii buufate kun kan durii caala, bara dabre kana keessa dhiiga ijoollee Oromoo akka galaana Adoolessaatti dhangalaasee jira. Haadholii fi ijoollee bira kutee akkoowwanillee galaafatee argama. Shamarran Oromoo, ililliiwwan teenya humna qawweetiin gudeeduun nu jalaa salphiseeti jira. Guddattuu waggaa torbaallee otoo hin hambisin galaafatee argama.
Kana hundaa oggaa godhu, uummanni addunyaa teeknolojii bara ammayyaa isa ijoolleen Oromoo irra geesseen daawwachaa ture. Ammallee ittuma jira. Mee eenyutu, xiinxalaa seenaa fi taliigaa (siyaasaa) isa kamtu Oromiyaa guutuu irraa, gandeeni fi magaalattiiwwan takkallee otoo hin hafin, Oromoon akkanatti ka’uun sochowee dachee sochoosa jedhee himee ture? Maarree, sabni akkasitti hudhamee waanjoo gabrummaa jala jiru, hudhaatiin sun hafuura tokkollee baafachuu isa dhoowwinaan akkasitti olka’e. Ammas jarri sammuun isaanii gara qawweetti geeddarame kun, qaawa tokkollee waan nuuf hin dhiifneef irra-caalaa akka waltaanee kaanu, akka waltaanee fincillu nu dhiibaa jiru. Ammas kan bara dabree caalaa akka alaa-manaa waltaanee sochoonu nu gochaa jiru. Ammaan booda jiraa Oromoo dhiisitii du’aan Oromoollee diina biyya keenya qabateen dhiddhiitamee buluu akka hin qabne, uummanni Oromoos beekee jira, Waaqnis isaaf beekee jira! Tokkummaan isaa, seexaan isaa, tooftaa fi malli isaa kana caalaa jabaatee itti-fufuu qaba! Uummanni Oromoo abbaan nagaa fi nageenyaa kun, inni nagaa ilmoo namaa dhiisitii kan bineeyyii fi biqiltuuwwanillee eegee bulu kun, daangaa namaa hin dabarre, nagaa ollaa fi namoota biyya isaa keessa nagaan jiraatanii hin booressine. Ammoo, warra jibbii fi qawween sammuu fi onnee isaa dhuunfate kanaan qeyeedhuma isaa keessatti, araddaadhuma isaa irratti dararamaa, ijoolleen isaa akka baala mukaatti jalaa harcawaa jirti. Warri Wayyaanee kun sadarkaa ilmoo namaa irraa gara sadarkaa bineensaatti ofumaan of gadibuusanii argamu. Kanaaf, uummannii fi sabni Oromoo qabsoo bilisummaa fi walabummaa isaa daran cimsee itti-fufuu malee, filmaata biraa tokkollee hin qabu!
Qabsoon ammaan tana Oromiyaa guutuu irratti adeemaa jiru kun qabsoo nagaati. Qabsoon kun akkanumatti, kana caalayyuu cimee of-cimsuun, irra-caalayyuu malaa fi tooftaa isaa babaldhifachuun itti-fufuu qaba! Kannneen keessaa qabsoon dinagdeewarra Wayyaanee irratti oofamu karaa fi daangaa isaa babaldhifachuun jabaatee itti-fufamuun kan hardhaa-boru hin jedhamne. Uummanni Oromoo seenaa isaa keessa deebiyuun irraa baratee isa ammaa kanaaf oolchuutu isa baasa. Jecha dubbii Oromoo keessa: “uummanni sitti jiguu mannaa, Waaqni sitti jiguu wayya“, kan jedhamutu jira. “Yoo Waaqni sitti jige, uummatatu kadhatee, booyee Waaqa kadhachuun jalaa si oolcha. Yoo uummanni sitti jige garuu kan isa jalaa si baasu hin jiru.“, jedha uummanni beekaan kun. Oromoon alagaa dhiisitii dhala Oromooyyuu, isa seera fi aadaa isaa jeeqe, isa waan dhalli namaa hin hojjanne hojjate tokko karaa itti isa adabu qaba. Nama akkanaa kanatti akka namuu hin dubbanne, yoo balaan irra gaye akka isaaf hin birmanne, yoo innii fi miseensi maatii isaa tokko boqote akka bayee hin awwaalle faa waliigaluun adaba. Ammas nuti Oromoonni, warra dhiiga kichuuwwan keenyaa akka galaanaatti dhangalaase kana: waa irraa hin binnu; waas isatti hin gurgurru. Hoteela isaa seennee hin bullu; restoraantii isaa seennee waa hin nyaannu. Konkolaataa isaatiin hin deemnu. Huccuu faabrikaa isaa keessaa baye binnee hin uffannu. Eekaa, meeqaa meeqa lakkoofnee tarreessa ollaa mitii dubbiin kun karaa maraan cimee, cimsee itti-fufamuutu kan Oromoo fi Oromiyaa baasu taha.
Uummanni Oromoo bilisummaa uumaan qabu kanaaf karaa maraan sochowuutu isa baasa. Tokkummaan Oromoo akka kana irra cimuuf, Oromummaan akka kana irra itituuf jabaannee irratti hojjachuu qabna! Dureewwan amantii fi manneen amantii marti: kan Waaqeffataa, kan Islaamaa fi kan Kiristaanaa iyya harmee Oromiyaa dhaggeeffachuun Waaqa kadhachuufii qabu! Ammaan booda laftii fi namni, gaarranii fi laggeen Oromiyaa marti diina qawween nu irra taa’ee dhiiga ijoollee teenyaa dhangalaasu kanatti ni ka’u. Laggeen Oromiyaa diinni waraabbatee irraa dhugu dhiiga itti-tahu. Margii fi furri inni irra deemu qoree laaftoo itti-tahuun isa waraanu. Biyyee fi cirrachi inni irra ijjatu barbadaa tahuun isa waxalu. Qilleensi Oromiyaa inni fuunfatu summii isatti taha! Nama Oromoo dhiisitii horii fi bineeyyiin Oromiyaatuu tokko tahuun isa diru! Ammaan booda namaa fi lafa Oromiyaatu, Ayyaanaa fi Waaqa Oromootu ijoollee Oromootiif iyyee iyya dabarsa! Erga Waaqni fi Lafti nuuf iyyee iyya dabarsee, guyyaan bilisummaa fi walabummaa keenyaa dhiyaachaa jira jechaa dha!
Previous Buufatni Xayyaara Itiyoophiyaa (Ethiopianairline) ummata Oromoo bal’aa irratti Loogii hammana hinjedhamne hojjataa jira.
Next #OromoProtests har’a Amajji 6, 2016 jiraattonni Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada’aa Bargaa..